ခေါငျးဆောငျတဈဦးနှငျ့အတူ, သုံးလေးသငျတနျးပို့ခတြယောကျအတနြးအတှကအြဖှဲ့တဈဖှဲ့အဖွဈအလုပျလုပျကွသညျ။ အတနျး၏တိုးတကျရေးပါတီဂရုတစိုကျအဖှဲ့ကစောငျ့ကွညျ့နသေညျ။ အဆိုပါအိမျမှာအခနျးနညျးပွဆရာအခါအားလြျောစှာအငျတာဗြူးတှအေသီးအသီးကြောငျးသားနှငျ့လိုအပျပါကသူ / သူမ၏လလေ့ာမှုနှငျ့ ပတျသကျ. တဈဦးအကှံဉာဏကြိုပေးတျောမူ၏။
အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်အလယ် မှစ. , optional ကိုအတန်းအစားသင်ခန်းစာတွေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များအဘို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ, သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျောင်းသားများအတွက်လေးခြောက်ခုမှနာရီတစ်ပတ်ပူဇော်ကြသည်။
optional ကိုအတန်းအစားသင်ခန်းစာတွေ၏ဥပမာ: ဂျပန်ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲအဘို့အဘိတ် /
Writing ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများ / ဂျပန်များ၏နားလည်မှုအဘို့အ EJU / ဘိတ်ဂျပန်များအတွက်ပြင်ဆင်မှု
ဘွဲ့ရတက္ကသိုလ်ဝန်ခံချက် / အန်နီမေးရှင်းသုတေသနအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုရေးသားခြင်း / လူမှုရေးကိစ္စများ, ဝတ္ထု & အက်ဆေးများ Reading / စကားပြောနှင့်ရာတွင်ခန်းဂျီးဇာတ်ကောင်အပေါ် Speaking / အာရုံစိုက်အပေါ်အာရုံစိုက် / လုပ်ငန်းဂျပန်
optional ကိုအတန်းအစားသင်ခန်းစာတွေထက်အခြား, MCA ဒါနိမ့်သောဈေးနှုန်းနှင့်အတူအထူးသင်တန်းတွေကမ်းလှမ်း
ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ N1 အဆင့်အောင်မြင်မှု
ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ n2 အဆင့်အောင်မြင်မှု
(3)တရုတ်က Character Class: (မျှတာဝန်ခံ)
MCA ကဲ့သို့သောတက္ကသိုလ်တွေကိုသွားရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့လမ်းညွှန်မှုအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေး "ကျောင်းများများအတွက်ရှင်းလင်းချက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ", "ကိုယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ" သို့မဟုတ် "အင်တာဗျူးအလေ့အကျင့်" ။
တက္ကသိုလ် / သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းတွင်။ သူတို့ရဲ့ကျူရှင်သို့မဟုတ်ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေချီလွှဲပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦးသက်တမ်းတစ်ကြိမ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းသင်ရိုးအတန်းအစားအပြင်, MCA ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များကမ်းလှမ်း
တစ်မိန့်ခွန်းပြိုင်ပွဲ, ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအတှေ့အကွုံအတန်းအစား (အစဉ်အလာကခုန်, လက်ဖက်ရည်အဖြစ်
အခမ်းအနား, လက်ရေးလှ, ပန်းပွင့်အစီအစဉ်စတာတွေ) ။